MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Lucky Draw Terms & Conditions mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT GSM/WCDMA prepaid စနစ် ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည် Lucky Draw အစီအစဉ်ကာလအတွင်း အနည်းဆုံး၁၀၀၀ကျပ်ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ကံစမ်းခွင့်ရှိပါသည်။
အစီအစဉ်ကာလ – ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မေလ(၂၄)ရက်မှ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၄)ရက်အထိ
၁၀၀၀ကျပ် မှ ၁၉၉၉ကျပ်အထိ ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း Weekly Prize နှင့် Special Prize များကံထူးရန် အခွင့်အရေး Chance(၁) ခု နှင့် နေ့စဉ်ဆုများ ကံထူးခွင့်ရရှိမည်။
၂၀၀၀ကျပ် မှ ၂၉၉၉ကျပ်အထိ ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း Weekly Prize နှင့် Special Prize များကံထူးရန် အခွင့်အရေး Chance(၂) ခု နှင့် နေ့စဉ်ဆုများ ကံထူးခွင့်ရရှိမည်။
၃၀၀၀ကျပ် မှ ၄၉၉၉ကျပ်အထိ ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း Weekly Prize နှင့် Special Prize များကံထူးရန် အခွင့်အရေး Chance(၅) ခု နှင့် နေ့စဉ်ဆုများ ကံထူးခွင့်ရရှိမည်။
၅၀၀၀ကျပ် မှ ၉၉၉၉ကျပ်အထိ ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း Weekly Prize နှင့် Special Prize များကံထူးရန် အခွင့်အရေး Chance(၁၀) ခု နှင့် နေ့စဉ်ဆုများ ကံထူးခွင့်ရရှိမည်။
၁၀၀၀၀ကျပ်နှင့် အထက် ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း Weekly Prize နှင့် Special Prize များကံထူးရန် အခွင့်အရေး Chance(၂၀) ခု နှင့် နေ့စဉ်ဆုများ ကံထူးခွင့်ရရှိမည်။
နေ့စဉ်ကံစမ်းပေးမည့် ဆုမဲများ (Telecom Prize)
Data၊ MPT-MPT SMS
New Htaw B ဖုန်းဘေလ်
မှတ်ချက် : Telecom Prize ဆုများကို ဖုန်းငွေဖြည့်ပြီးလျှင်ပြီးချင်းကံထူးနိုင်ပါသည်။
(၅)ကျပ်သားရွှေ့ပြားဆုများ – တစ်ပတ်လျှင် (၂) ဆု
TOYOTA Vios ကားသစ်ကြီး စုစုပေါင်း (၂)စီး
Week-1 ကံထူးရှင်များကို မေလ(၃၁)ရက်တွင် ကြေညာပါမည်။.
အပတ်စဉ်ဆုများ – (၅)ကျပ်သားရွှေပြားဆု (၂)ဆု
Week-2 ကံထူးရှင်များကို ဇွန်လ(၇)ရက်တွင် ကြေညာပါမည်။.
Week-3 ကံထူးရှင်များကို ဇွန်လ(၁၄)ရက်တွင် ကြေညာပါမည်။.
အထူးဆု – TOYOTA Vios ကားသစ်ကြီး (၁) စီး
Week-4 ကံထူးရှင်များကို ဇွန်လ(၂၁)ရက်တွင် ကြေညာပါမည်။.
Week-5 ကံထူးရှင်များကို ဇွန်လ(၂၈)ရက်တွင် ကြေညာပါမည်။.
Week-6 ကံထူးရှင်များကို ဇူလိုင်လ(၅)ရက်တွင် ကြေညာပါမည်။.
Week-7 ကံထူးရှင်များကို ဇူလိုင်လ(၁၅)ရက်တွင် ကြေညာပါမည်။
အပတ်စဉ်ကံထူးရှင်များနှင့် အထူးဆုကံထူးရှင်များကို အထက်ဖော်ပြပါရက်များတွင် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြား ကြေညာပါမည်။
ဆက်သွယ်၍မရသော ကံထူးရှင်များကို အနီးစပ်ဆုံး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိ(နောက်ထပ် ၅ရက်အထိ) ဆက်လက် ဆက်သွယ်ပါမည်။ ဆက်သွယ်၍မရပါက ကံထူးရှင်အသစ်ကို ထပ်မံရွေးချယ်ပါမည်။
week-7 အတွက် ကံထူးရှင်များကို ဇူလိုင်လ(၁၅)ရက်တွင် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါမည်။ (၅)ကြိမ်တိတိဆက်သွယ်မည်ဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်၍မရပါက ဇူလိုင်လ(၁၅)ရက်တွင် ကံထူးရှင်အသစ်ကို ထပ်မံရွေးချယ်ပါမည်။
ကံထူးရှင်များသည် မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့် ကံစမ်းမဲပေါက်သည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆုထုတ်ယူချိန်တွင်တင်ပြရပါမည်။
ကံထူးရှင်များအားလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။ ( မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည်။)
အမ်ပီတီဝန်ထမ်းများနှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်မရှိပါ။
Toyota Vios ကံထူးရှင်များသည် တရားဝင်ဖြစ်စေရန်နှင့် သတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို ဖြည့်စွက်ရမည်။
Toyota Vios ကံထူးရှင်သည် ကားလိုင်စင်ကို ရန်ကုန်လိုင်စင်မှလွဲ၍ နယ်လိုင်စင်အဖြစ် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ကံထူးရှင်များသည် ဆုကြေညာပြီးနောက် ရက်၉၀အတွင်း မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို ဆုလာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိပါက အဆိုပါကံထူးရှင်၏ ကံထူးရှင်ဖြစ်ခွင့်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ မည်ကဲ့သို့ပင် ဖော်ပြထားစေကာမူ အမ်ပီတီသည် ယင်း၏ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အရ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းခြင်း (သို့) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ကြိုတင်အသိပေးခြင်း (သို့) တာဝန်ခံခြင်း မရှိဘဲ ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကို အခါအားလျော်စွာ ပြုလုပ်ခွင့်ရှိသည်။
ဆုပစ္စည်းတစ်ခုခုကို လက်ခံရာတွင် ကံထူးရှင်၏ အမည်၊ ဓာတ်ပုံ၊ အသံ နှင့် ၊ သို့မဟုတ် အလားတူအခြားဖြစ်ရပ်တို့ကို ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသည့် ဖြစ်ရပ်များမှအပ အမ်ပီတီက ပြုလုပ်သည့် သတင်း၊ကြော်ငြာ၊အရောင်းမြှင့်တင်ရေး၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး နှင့် ၊သို့မဟုတ် အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အခကြေးငွေမပေးဘဲ အသုံးပြုရန် သဘောတူကြောင်းလည်း ပါဝင်သည်။
ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရာနှင့် ဆုပစ္စည်းလက်ခံယူရာတွင် သုံးစွဲသူများသည် ယင်းနှင့်စပ်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်သည့် ဆုံးရှုံးမှု (သို့) ထိခိုက်မှု ( ထူးခြားသော၊ သွယ်ဝိုက်သော ဆုံးရှုံးမှု နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆုံးရှုံးမှုများအပါအဝင်)များနှင့်ပတ်သက်ပြီး တောင်းဆိုမည်မဟုတ်ကြောင်း သဘောတူရမည်။